SIDEE LOO SAMEEYAA MACAANKA QOTADA DHEERIGA AH: CUNTADA UGU FIICAN - CHERRY
Sida loo karsado macaanka johannesört ee jiilaalka: tallaabo tallaabo tallaabo ah oo sawir leh
Cherry macmacaanka, gacmo lagu kariyey guriga, waa raaxo aad u fiican, ilaalinta dhammaan nafaqooyinka ku jira ee berry cusub.
Iyada oo lagu daro noocyada kala duwan ee maaddooyinka, waxaa loo isticmaali karaa sida saxanka kali ah ee loogu talagalay quraacda, iyo sidoo kale noocyo kala duwan ama wax lagu daro macmacaanka.
Ka eeg cuntooyinka fudud ee fudud.
Waa maxay cherry waa ka fiican si aad u qaadato macaanka
Si aad u samayso macaanka, jeeriga waa in la bislaado, casaan mugdi ah casaan. Si aad u diyaariso alaab tayo sare leh, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo berry cusub, daruuri ah laga gooyey geed leh stem, si loo ilaaliyo dhammaan juice ee cherry. Mugdi madow, ku dhowaad miro guduud ah ayaa ugu haboon.
Ma taqaanaa? Midabka burgundy midab leh Berry antioxidant anthocyanin, hoos u dhigidda kolesteroolka iyo sida caadiga ah shaqada caadiga ah ee wadnaha iyo xididdada.
Qodobka caadiga ah ee macaanka ee cherry.
dhalooyinka leh dabool leh;
Baro sida loo qallajiyo, loo xaaqo miro ee cherry, sida loo sameeyo bootiin cherry ah, ku shub, sida loo diyaariyo jiilaalka.
Cuntadani waxaan u baahanahay:
0.5 galaas oo biyo ah;
1 kg oo ah jeeriga;
750 garaam oo sonkor ah.
Video: sida loo sameeyo macaanka cagaaran
Baro sida loo dhigo gasacadaha.
Tallaabada Hore ee Tallaabooyinka Kaqaybqaadashada
Ka hor inta aan la bilaabin nidaamka, jeeriga ayaa la kala saaraa, peduncles ayaa la saaraa oo maydhay dhowr jeer. Kadib:
Ku shub cherry ee digsi, ku shub nus koob oo biyo ah oo ku shub dabka. Karkari daqiiqo 7 daqiiqo si aad u fiican uga qaadisid godadka iyo maqaarka.
Karkari qaybaha berriga ee shaandho iyo qashin leh saarista abuurka.
Ku rid digsiga leh diirimaad kuleyl dhexdhexaad ah, ku dar sonkorta, isku kari, kedis badanaa, karkari 10 daqiiqo. Tani waa ku filan si ay u sii dhoobo, xajisto nafaqooyinka iyo midabka ubaxa u bislaaday. Mar walba, xumbada sare ee dusha sare waa in laga saaraa.
Inkasta oo cherry loo kariyay, waa lagama maarmaan in la dhaqo iyo nadiifiyo dhalooyinka, ku shub biyo karkaraya kuna dabool dabool leh dhawr daqiiqo.
Biyaha ku daadi, ku shub malmaleysi la karkariyey oo dhalooyinka ku shub kuna dabool daboolka.
Awoodda si aad u leexiso qoorta si aad u hubiso tayada marinka. Ku duub oo iska tag si aad u qaboojiso.
Ku kaydi meel qabow.
Waa muhiim! Yar yartahay awooda lagu xirayo badeecada, jelly badan ayaa la sameeyaa inta lagu jiro qaboojinta.
Karinta khudradda cherry leh citric acid.
Waxaa loo baahan doonaa:
silsilad bir ah;
Si aad isugu diyaariso waxaad u baahan tahay:
5 kg oo ah ubaxyo u bislaaday.
1.5-2 kg ee sonkorta granulated.
Video: sida loo sameeyo khudradda cherry leh citric acid
Raadi haddii ay ku haboontahay in ay sii kordhiso geedkaaga Shpanka, Precious Carmine, Rootinada Winter, Ashinsky, Miracle Cherry, Lighthouse, Faa'iido, Chernokorka, Frost, Ural Ruby, Lyubskaya, Zhukovsky, Black Large, Turgenevka, Dhalinyarada, Kharitonovka, Shukulaatada, Vladimirskaya.
Ka hor inta aan la bilaabin diyaargarowga berry ah ayaa la kala saaraa, maydhaa oo lafaha laga saaraa. Nidaamka karinta waa sida soo socota:
Ku shub cherry ee digsi, ku rid kariyaha iyo isku kari ilaa 20-40 daqiiqo ilaa softened.
Damiinka ka saar shooladda oo ha qaboobee.
Kala saar juiceka la sii daayay (qiyaastii 1 l).
Qaybaha jajab oo ku rid shaandho shaandho (2 litir oo dhumuc ah) oo dab dami.
Ku shub sonkorta iyo citric acid weel leh casiir leh, si wanaagsan u walaaq. Kari kuleyl dhexdhexaad ah, si joogto ah u garaac oo furo xumbada, illaa 10 daqiiqo. Calaamadaha diyaarinta - xumbada laga qaado xayawaanka kuma faafin.
Khudaarta diyaarka ah ayaa si tartiib ah ugu shubtay weel qafiif ah oo la karkariyey kuleyl aad u sarreeya iyadoo la karkarayo 25 daqiiqo. Tilmaameedka diyaargarowga - macaanka ma daadinayo qaadada.
Ku sii daa bangiyada, iskulaabso oo dabool hoos u dhig.
Ku dabool buste una tag si aad u qaboojiso.
Waxaan nadiifineynaa kaydinta, ka fiican meel qabow.
Macmacaanka macmacaanka leh ee dheeriga ah ee currants cas, kaas oo ku siin doona cherry guryaha jelly dheeraad ah iyo dhadhan macaan.
Cunto karinta ayaa u baahan:
laba saxan oo bir ah;
Wax ka baro faa'iidooyinka qaxwada, saqafkooda iyo caleemaha.
1 kg oo ah jiirka.
1 kg oo ah currant cas oo aan lahayn dabo.
1-1,2 kg oo sonkor ah.
Video: sida loo sameeyo macaanka cherry leh dheeriga ah ee currant cas
Raashin samaynta tilmaamaha:
Ku shub jeeriga diirka ee baaquli iyo ku shub nuska caadiga ah ee sonkorta granulated. Ha soo dhajiyo, sidaas darteed berry ah ha u casiir.
In weelka birta labaad ku shub currants cas iyo sonkorta haray.
Dareeraha si aad u disho currants leh sonkorta iyo gelin kariyaha.
Ka dib markii currant karkariyo, yaree dabka ilaa ugu yaraan iyo kariyo 15 daqiiqo, kareyso waxyaabaha ku jira baaquli.
Ku dar jiir diyaar ah sonkor iyo si fiican u walaaq.
Sida ugu dhaqsaha badan ee la kariyey isku walaaqay, isku kari ilaa 8 daqiiqadood.
Ku shub bangiyada ilaa garbaha, dabool daboolka.
Ku rid weel diyaarsan oo loogu talagalay nadiifinta, ku shub biyo kulul iyo nadiifin ilaa 8 daqiiqo daasadaha 0.5 litir (1 litir jeermis dilay 12 daqiiqo).
Kadibna xargaha duuduubka, kor u rog dhinaca korkiisa oo u ogolow inay si buuxda u qaboojiso.
Waa muhiim! Suugada saxda ah ee la diyaariyey ma fido, laakiin si sahlan ayaa loo leexleeyaa. Hot - waxay hoos u dhacdaa qashin ku jirta qulqulka khafiifka ah, iyo qabow - waxay ku dhacdaa qaybo yaryar.
Cherry macmacaanka leh dheeriga ah ee dhirta kala duwan ayaa lagu qadarin doonaa ugu caansan yihiin. Si aad u bixiso dhadhan dhadhan ah ee 1 kg of jeeriga loo diyaariyey, waxaad u baahan tahay inaad qaadato 1 stick oo qorfe, 3 xabbo oo toon ah iyo cardamom. Kalluunka waxaa lagu dhajiyaa jiiska. waxaa ku xiran qaab bac ah si aysan waxyaabahaasi ku dhicin. Marka ay booguhu isku boodaan, waxay ku dhejiyaan koofiyadaha diyaarsan. Dhamaadka karinta, dhirta si fudud ayaa loo soo saaraa, ka tagta dhadhankaaga basbaaska.
Waxyaabo badan oo dhir leh ayaa leh waxyaabo ka hortag ah antimicrobial iyo antifungal, sidaa darteed waxay u dhaqmi karaan sida ilaalinta dabiiciga ah. Tusaale ahaan, hal xiddig oo ka mid ah xiddigta xiddigta leh, oo la dhigo dusha sare ee daboolka, ma sii kordhin doonto dhadhan dheeraad ah, laakiin sidoo kale waxay kordhisaa nolosha shelf ee sheyga. Turmeric wuxuu leeyahay saameyn la mid ah.
Kalluunka ayaa sidoo kale saameyn wanaagsan ku leh dheefshiidka cuntada. Vanillin, sinjiga, roodhida iyo xitaa tufaaxa ayaa lagu dari karaa jilicsan - waxay ku xiran tahay doorashooyinka dhadhanka shakhsi ahaaneed.
Baro sida aad u isticmaali kartaan qorfe, xiirto, kareemka, faashad, rinjiga, roodhida ujeedooyin kala duwan.
Maxaa kale oo aad isku dari kartaa
Wax soo saarka delicious waa la diyaarin karaa marka lagu daro mass khudbada ah ee maaddooyinka kala duwan. Xaqiiqadan:
Gooseberry - for 1 kg ee jeeriga iyo sonkorta dhamaadka karinta waa lagama maarmaan in lagu daro 0.15 kg oo ah cabitaanka miro yar.
Currant black - qaawi 0.5 kg ee berry ee Booqday Furimaha Dagaalka hilib ah, ku shub 60 ml oo biyo ah iyo kariyo ilaa qaro weyn. Kaliya kaliya 1 kg ee jeeriga iyo karkariyo 150 ml oo biyo ah. Markaas isku dar wax kasta, ku dar 0,75 kg oo sonkor ah iyo kariyo ilaa diyaar.
Tufaax - 0.5 kg oo sonkor ah ayaa loo qaadaa 1 kg oo tufaax ah oo ay ku milmeen shaandho. Cuntada waa la kariyaa ilaa sonkorta si dhammaystiran loo kala diro. Si gooni goosad ah oo isku mid ah ayaa loo dhiibay cherry. Wax walba waa isku dhafan oo diyaar u ah gobolka ee macaanka.
Plomme - 500 g oo ah jeeriga ayaa loo baahan yahay halkii 1 kg ee ugxan. Dhamaan walxaha isku dhexjiray, ku dar 2 kg sonkor ah iyo 10 g of citric acid. Karkari kuleylka ugu badnaan 10 ilbidhiqsi. Si tartiib ah ayaa loo isku duraa qadar yar oo ah gelatin biyaha ah, keeno karkariyo ku shub dhalooyinka.
Qoob - 0.5 kg ee jeeriga isku qasan leh 0.25 kg ee qaraha, jarjar dhuuban. Ku dar 0.75 kg oo sonkor ah iyo maqaar khafiif ah dhadhanka dhadhanka. Iska ilaali dhowr saacadood, ka dibna ku karkarin kuleylka sare 4 daqiiqo. Ku dar 3 tbsp. malqacadaha voodhada cherry iyo sii wadaan in ay ku kariyaan kuleyl hooseeya ilaa inta la kariyey.
Baro waxa la kariyo laga bilaabo miro yar, currant madow, tufaax, malab, qaraha qaboobaha.
Ma taqaanaa? In ka kooban ka mid ah cocktail aad u caan ah "Daiquiri Harry" waxaa jira macaanka a cherry.
Alaabta la dhammeeyey waxaa la keydin karaa 3 bilood ilaa 3 sano. Waxay ku xiran tahay waxa lagu kaydin doono. Aluminium iyo kuleylaha kuleylka ah - ugu badnaan 6 bilood. Haddii weelasha galaaska iyo macaanka ayaa la nadiifiyey, ka dibna waxaa lagu kaydin karaa ilaa saddex sano.
Goobta ugu keydsan waa mashiinka qallalan ee leh heerkul joogto ah oo ah 15 ° C. Waxaad ku kaydin kartaa alaabta halkan iyo ilaa 3 sano. Guryaha magaalooyinka, sida caadiga ah, waxaa jira qolal gaar ah oo lagu kaydiyo oo ku habboon in lagu kaydiyo meelaha bannaan ee xilliga jiilaalka. Waxay leeyihiin heerkul deggan oo aan lahayn iftiinka qorraxda, taas oo ka dhigaysa suurtogalnimada in lagu keydiyo macaanka xaaladahan ilaa laba sano. Kafaarada dhalada ee aan la qabin waxaa lagu keydin karaa qaboojiyaha illaa 4 asbuuc.
Maxaa la adeegi karaa?
Caatada qoyan ee khudradda ah ayaa la cuni karaa iyada oo sheyga qalafsan ee shaaha, ku faafi on toasty, adeegay leh canjeelada iyo canjeelada. Jam waxaa loo adeegsadaa sameynta rootiyooyinka, sida buuxinta keegga iyo tartanada, dhejiyo kala duwan iyo casseroles. Kalluunka iyo suugada hilibka, waxay ku dari doonaan dhadhanka dufan ee saxanka. Isticmaalka cuntooyinka la bixiyo, waxaad diyaarin kartaa raaxeysigan, kaas oo ku farxi doona dhadhankiisa cajiib ah jiilaal qabow. Intaa waxaa dheer, macaanka cherry wuxuu noqon doonaa badeeco dabiici ah oo wanaagsan oo loogu talagalay ilaalinta difaacidda iyo daaweynta ka hortag ah ee qabowga.
Hase yeeshee, marnaba ma haynin khudradda qoyan ee qoyan))) laakiin haddii aan kariyo tufaax dhexdhexaad ah))) sharoobada, ka dibna ku dar jamiirta caleemaha)) waxay dhumuceysaa)) si dabiici ah u tuura)))
IMHO, haddii aad karisid johanneserka muddo dheer, waxay lumisaa dhammaan dhadhanka (iyo dhadhanka sonkorta la gubay u muuqda ee macaanka), laakiin waxay u badan tahay inay ahaato mid adag)))
Lady la Candyber
Guud ahaan, illaa iyo intii aan ogahay, macaanka cagaarka oo aan la daahirin. Cherry macmacaan waxaa la diyaariyaa iyada oo dheeraadka ah ee tufaax loogu talagalay joogtada ah isku dhafan oo isku dhafan. Cuntadani waa tan: 3 kg oo ah jiilka aan qandhicirnayn, 1 kg oo tufaax la faaruqiyay oo aan lahayn asal iyo 2, 5 kg oo sonkor ah ayaa la qaadaa. Marka hore, jeeriga ku shub dhammaan sonkorta lagama maarmaanka ah. Marka ay ku ridaan casiirka, waxay karkaraan 10-15 daqiiqo dhowr jeer maalintii. illaa iyo xilligaas, tirada guud waxay bilaabmaysaa inay sii dhumuceyso. Wakhtigan, tufaaxa waa la jeexay. Tufaax la jarjaray ayaa lagu soo rogay macaanka dhagaxyada oo la kariyey ilaa 15 daqiiqo. Kadibna, la dhigo bangiyada iyo duudduubka. Ama ma xiri kartid, oo dabooli kartid iyo faashad. Markaas waxaa fiican in lagu ilaaliyo barmarka ah ee macaanka ee dhulka hoostiisa.
Waxaa laga iibsanayaa dukaamada, waxaad qaadan kartaa gelfix ama sonkorta qallalan si aad u barato. Mid kasta oo ka mid ah alaabooyinkaasi waxay leeyihiin tilmaamo loo isticmaalo. Dhammaan curisyada waa in ay ka mid yihiin pectin (mid ka mid ah tufaaxa iyo miraha kale iyo berry), taas oo u ogolaanaysa macaanka in ay qaataan caag 'jelly' ah oo ku jira wax daqiiqado ah, si looga fogaado karkarinta iyo ilaalinta fitamiinada. oo leh casiir ka yimid, ku daray kittin, oo keenay karkariyo, ku dar sonkorta, kala diri (mar kale loo keenay karkariyo), la duudduubay gasacadaha cufan leh daboolo ku shub biyo karkaraya :)))))). Way fududahay - in aan qoro wax ka badan intii la samayn lahaa :))) Guud ahaan, anigu ma aan dhibsanayo kilo of jeeriga - dubi kake (sida jarrottes) oo ha ka welwelin :)